Ny filoha teo aloha Afghanistan dia mipetraka any UAE miaraka amina vola 169 tapitrisa $
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Ny filoha teo aloha Afghanistan dia mipetraka any UAE miaraka amina vola 169 tapitrisa $
Vaovao Mafana Afghanistan • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Ny Ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena UAE dia afaka manamarina fa ny UAE dia nandray ny filoha Ashraf Ghani sy ny fianakaviany ho tonga teto amin'ny firenena noho ny maha-olona.
Ny filoham-pirenena voaroaka ao Afghanistan dia mivoaka ao UAE.
Ashraf Ghani dia voampanga ho nandroba 169 tapitrisa dolara tao amin'ny tahirim-bolan'i Afghanistan.
"Niarahaba" an'i Ghani sy ny fianakaviany "tamin'ny maha-olombelona" i UAE.
Ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny avy amin'ny Emira Arabo Mitambatra dia namoaka fanambarana androany nanambara fa naka ny filoham-pirenena teo aloha Ashraf Ghani sy ny fianakaviany ny firenena "noho ny antony maha-olona" taorian'ny nandosiran'ny filoha voaongana an'i Afghanistan ny alahady teo rehefa nanakaiky an'i Kabul ny Taliban.
Ashraf Ghani sy ny fianakaviany dia mipetraka ankehitriny Abu Dhabi, renivohitry ny UAE.
"Ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena UAE dia afaka manamarina fa ny UAE dia nandray ny filoha Ashraf Ghani sy ny fianakaviany ho tonga teto amin'ny firenena noho ny maha-olombelona," fanambarana fohy, navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny UAE novakiana feno.
Nandositra i Ghani Afghanistan ora maromaro talohan'ny nidiran'ny hetsika radikal Taliban tao Kabul nefa tsy nisy fanoherana.
Tsy mazava ny lalana nalehany tany UAE na ny nahatongavany tany. Talohan'izay dia nilaza i Kabul News fa nijanona tao Oman izy, toerana nahatongavany avy any Tajikistan. Ny gazety Hasht-e Subh Daily dia nilaza fa nanidina tany Oman avy any Ozbekistan i Ghani.
Navelany tao an-drenivohitr'i Rula Ghani vadiny sy olona roa hafa ny renivohitra Afghan, ary voalaza fa nitondra vola 169,000,000 XNUMX XNUMX $ tany aminy. Raha ny filazan'ny masoivoho rosiana ao Kabul dia nanandrana nitondra vola be ny Ghani ka tsy tafiditra tao anaty angidimby ary nisy ny nilaozana teo amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny masoivoho afrikanina any Tajikistan Muhammad Zohir Agbar dia nilaza fa nandositra ny firenena ny filoha afgana Ashraf Ghani, izay nitondra vola mitentina 169 tapitrisa $ avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana.
Ilay diplaomaty dia niantso ny fandosiran'ny filoham-pirenena Afghan ho "famadihana ny fanjakana sy ny firenena" ary nanampy izy fa Ghani dia nangalatra $ 169 tapitrisa tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana.
Raha ny filazan'ny ambasadaoro dia hanao antso amin'ny Interpol izy amin'ny fangatahana hisambotra an'i Ashraf Ghani ary hitondra azy eo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena.
Nisy manam-pahefana ambony sy mpanao politika ambony hafa nanaraka an'i Ghani tamin'ny fandaozana ny firenena, anisan'izany i Marshal Abdul-Rashid Dostum, ary Atta Muhammed Nur, izay nanambara ny ady tamin'ny Taliban tany amin'ny faritanin'i Balkh, lefitry ny lefitry ny fiarovana nasionaly Serur teo aloha. Ahmad Durrani, ny minisitry ny fiarovana teo aloha Bismillah Mohammadi ary ny komandin'ny milisy ao amin'ny faritany Herat, Mohammad Ismail Khan.
Steven Malarski hoy:
18 Aogositra 2021 amin'ny 16:16
Tsy misy miova. Inona no antenaina !!